उत्पादकता उपकरणहरूको एक भर्चुअल cornucopia।
ठीक छ... म यसलाई फेरि प्रयास गर्नेछु... noscript साँच्चै तपाइँको साइट btw को खराब गर्दछ। मैले marketingtechblog.com लाई अनुमति दिएँ, तर स्पष्ट रूपमा त्यो पर्याप्त थिएन। र मैले अन्य 16 मध्ये कुनलाई अनुमति दिने भनेर देखेको छैन।
तर वैकल्पिक ब्राउजरहरूले ActiveX लाई समर्थन नगरेसम्म, IE ले IT विभागहरूमा सधैं खुट्टा होल्ड गर्नेछ।
ActiveX केही वर्षमा मर्नेछ, ck, वा कम्तिमा अपरिवर्तित छोडिनेछ... मेरा शब्दहरू चिन्ह लगाउनुहोस्। कुनै पनि वेब अनुप्रयोगलाई स्थापना आवश्यक पर्दैन र अपरेटिङ सिस्टममा ड्राइभरहरू स्थापना गरिनुपर्छ। यो अनावश्यक छ।
माइक्रोसफ्टले सिल्भरलाइटको पहुँच विस्तार गर्न कडा मेहनत गरिरहेको छ। Flex/AIR जस्तै, सिल्भरलाइट माइक्रोसफ्ट टेक्नोलोजीहरूसँग वेब देखि डेस्कटप अनुप्रयोगहरू निर्माण गर्नको लागि मुख्य प्लेटफर्म हुनेछ। कार्यालय पहिलो प्रमुख सुइट हुनेछ जुन यसरी सुरु हुनेछ।
मैले मेरो साइटलाई नोस्क्रिप्टको साथ कहिल्यै परीक्षण गरेको छैन! म अनुभवमा दृढ विश्वासी हुँ जुन क्लाइन्ट-साइड स्क्रिप्टिङले साइटमा ल्याउन सक्छ। आउनुहोस्... तपाईलाई 2008 मा लैजाऔं। 😉
यद्यपि यस बिन्दुमा, Active-X ले चीजहरू गर्दछ जुन कुनै पनि आगामी प्रविधिले गर्न सक्दैन।
मानौं कि म तपाईंलाई मेरो सुरक्षित साइटमा फिंगर प्रिन्ट रिडर मार्फत लग इन गर्न चाहन्छु। त्यो कसरी हुन्छ? एक सक्रिय-X नियन्त्रण।
त्यसोभए जबसम्म तिनीहरूले ब्राउजरलाई यति कमजोर बनाउँदैनन् तपाईंले मानिसहरूको प्रणाली डाइरेक्टरीहरू पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ, वा तिनीहरू एक्टिभ-एक्सको क्रस प्लेटफर्म प्रतिस्थापनको साथ आउँछन्... यो वरपर रहनेछ।
र मैले हेरिरहेको साइटबाट जाभास्क्रिप्टसँग सामान्यतया ठीक छु। अर्कोतर्फ तपाईंको साइटले 18 विभिन्न स्रोतहरूबाट स्क्रिप्ट फाइलहरू कल गर्दछ, जसमध्ये मैले केवल3(youtube, google, googlesyndication) स्वीकृत गरेको छु।
कम्पनीहरूमा मसँग प्रमुख अप्स र IT थियो, हामीले फायरफक्सलाई पूर्वनिर्धारित ब्राउजर बनायौं (IE त्यहाँ पनि थियो)। caviat यो छ कि हाम्रा प्रयोगकर्ताहरू प्रायः प्राविधिक ज्ञानी थिए। जबसम्म तपाईं एक भारी विनियमित उद्योगमा हुनुहुन्न, प्रणाली लक-डाउन को धेरै बेकार छ। सबैलाई लाइनमा राख्ने प्रयास गर्नुभन्दा मेरा मानिसहरूलाई कसरी अझ प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा मेरा प्राविधिकहरूले समाधान खोज्न चाहन्छु।
लक डाउन पुरानो विद्यालय हो । उचित प्रशिक्षण र शिक्षाले प्रगतिशील कम्पनीहरूलाई प्रभावकारी बनाउँछ।
यदि तपाइँ नियम अनुसार खेल्नुभयो भने चीजहरू सजिलो हुनेछैन। तर, यो सधैं लामो अवधिको लागि लिनको लागि उत्तम विकल्प हो।
फायरफक्स addons को राम्रो सूची। मेरो फायरफक्समा सूचीबद्ध कुनै पनि एडअनहरू छैनन्। GreaseMonkey मा तपाईंसँग सहमत हुनुहुन्छ। मैले पहिले केही समस्याहरूको सामना गरेको छु र यो बिना चीजहरू ठीक छन्।
मैले लामो समयदेखि फायरफक्स प्रयोग गरिरहेको छु अब म कहिलेकाहीँ धेरै मानिसहरू अझै पनि IE प्रयोग गर्न बिर्सन्छु।
एड-अनहरूको ठूलो सूची। मैले वास्तवमा मेरो एड-अनहरू फिर्ता लिनुपर्‍यो किनभने म तिनीहरूसँग केही समयको लागि क्यान्डी स्टोरमा बच्चा जस्तै थिएँ। मसँग रंगीन ट्याबहरू, स्वत: पूर्वावलोकनहरू, डाउनलोड बारहरू, सम्पूर्ण नौ गजहरू थिए!
जब तपाइँ केहि व्यक्तिको फायरफक्स ब्राउजरहरू हेर्नुहुन्छ यो हास्यास्पद छ। तिनीहरूको स्क्रिनको आधा भाग एड-अन उपकरणपट्टीहरूद्वारा लिइन्छ!
मेरो (नयाँ-नयाँ) काममा मेरो अनुभव यो थियो कि यसलाई प्राप्त गर्नको लागि मैले आफूलाई फायरफक्सको योग्यता प्रमाणित गर्नुपर्थ्यो। सबैजना IE मा मानक छन्, तर मैले "मार्केटिंग" व्यक्तिको लागि अलिकति प्राविधिक विश्वास देखाएपछि, उनीहरूले मलाई फायरफक्समा हुक गर्ने गोप्य फोल्डर देखाए। मलाई थाहा छैन किन सबैसँग यो छैन, मलाई लाग्छ कि तिनीहरू "प्रशिक्षण" सँग सम्झौता गर्न चाहँदैनन्। बाहिरबाट कम्पनीमा आउँदा, मलाई मेरो उत्पादकता बढाउन FF कसरी प्रयोग गर्ने भनेर पहिले नै थाहा छ।
तपाईंको आईटी विभागलाई बुझाउनको लागि कि फायरफक्स साँच्चै उत्कृष्ट छ, सायद तपाईंले उनीहरूलाई देखाउनु पर्छ कि ब्राउजरमा मानिसहरू कति समर्पित छन्। तपाईंको प्रमाण यो हुन सक्छ फायरफक्स क्रप सर्कल। मैले कुनै पनि अन्य ब्राउजरहरूमा समर्पित कुनै क्रप सर्कलहरू देख्दिन!